डलर सटही गर्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् कुन देशको मुद्राको विनिमयदर कति रहेको छ ? | News Polar
डलर सटही गर्दै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् कुन देशको मुद्राको विनिमयदर कति रहेको छ ?
काठमाडौं । मङ्गलबार अमेरिकी डलर, युरोसहित अन्य देशको विनिमयदर केही घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २० रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६३ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६४ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १६ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १८ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ २९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ०५, २०७८, ११:४३:४६